Kimberley Process Inotadza Kubuda neChisungo paNyaya yeZimbabwe
Mbudzi 05, 2010
Mukuru we World Diamond Council, Va Eli Izhakoff, vaudza Studio 7 kuti sachigaro we KP, Va Hirsch Boaz, weku Israel, vachange vachiyananisa nyika dzisiri kuwirirana panyaya yeZimbabwe mumasvondo maviri ari kutevera kuti vasvike pachibvumirano chinofadza mativi ose
Musangano weKimberley Process, KP, wakundikana zvachose kubuda nechisungo panyaya yeZimbabwe. Nhengo dzesangano iri dzaparadzana neChishanu mu Jerusalem, ku Israel, mushure mekunge dzatadza kuwirirana dzose kuti Zimbabwe yopihwa here, kana kunyimwa mvumo yekutengesa mangoda ayo ekwaMarange pasina muongorori weKP.
Mukuru we World Diamond Council, Va Eli Izhakoff, vaudza Studio 7 kuti sachigaro we KP, Va Hirsch Boaz, veku Israel, vachange vachiyananisa nyika dzisiri kuwirirana panyaya yeZimbabwe mumasvondo maviri ari kutevera kuti vasvike pachibvumirano chinofadza mativi ose.
Vati havaoni Zimbabwe ichizotanga kutengesa mangoda ayo pasina muongorori we KP, kunyange hazvo gurukota remigodhi, Va Obert Mpofu, vakatyisidzira kuti Zimbabwe ichatanga kutengesa mangoda ayo pasina KP.
Va Izhakoff vati chido chemunhu vese kuti nyaya ye Zimbabwe ipere nekuti yavakutadzisa kuti KP iite mamwe mabasa ayo. Va Charles Mangongera inyanzvi mune zvematongerwo enyika. VaMangongera vanoti zvanga zvisina kufanira kuti KP ipe Zimbabwe mvumo pane ino nguva nekuti pachine zvinoda kugadziriswa kwa Marange sekubvisa mauto nezvimwe zvakadaro.